निर्माता मा छनौट मा सुझाव र समीक्षा: मलजल लागि शौचालय पम्प
एक पुन: डिजाइन वा ओवरहाल सुरु गर्न निर्णय, तपाईंलाई-घर ईन्जिनियरिङ् सेवाहरूको दुर्भाग्यपूर्ण नियुक्ति रूपमा, यस्तो कण्टक भेट हुन सक्छ। कहिलेकाहीं यो वास्तवमा निकै सान्त्वना खोज्ने विचार भाडादारों अनुवाद hinders।
सबै भन्दा साधारण कठिनाई निजी घरमा मल प्रणालीमा रूपमा, नयाँ बाथरूम वा उपकरण अर्को कोठा मा स्थानान्तरण गर्न मौका को कमी अक्सर गुरुत्वाकर्षण (गुरुत्वाकर्षण को सेना को प्रभाव अन्तर्गत मलको को पाइपलाइन तल उत्प्रेरित गर्छ) छ। जलाशय स्तर तल स्थान कचौरा बाथरूम राम्ररी काम छैन भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व हुनेछ।
तर निराश गर्न र मौलिक योजना परिवर्तन। तपाईं दबाब गुरुत्वाकर्षण ढल प्रणाली रूपान्तरण गर्न आवश्यक - त्यहाँ बाहिर एउटा तरिका हो। यसो गर्न, तपाईं शौचालय लागि पम्प खरिद गर्न आवश्यक छ।
Structurally, उपकरण दूषित तरल उठाने लागि निमित्त जो एक बिजुली उपकरण हो। यसको मुख्य फाइदा सञ्चालन समयमा कम्पन र हल्ला को कमी छ।
शौचालय पम्पिंग तरल को उत्कृष्ट काम गर्ने ठोस वर्तमान हो जसमा लागि पनि पम्प, जो को अनुज्ञेय आकार उपकरण को मापदण्डहरु मा निर्भर गर्दछ।
ढल पंपों को क्षमता आधारमा निम्न प्रकार को हुन सक्छ:
एकल-चरण र तीन-चरण।
को तकलीफ संयन्त्र।
उपकरण एक विस्फोटक मिश्रण संग प्रयोगको लागि डिजाइन।
सबै मलजल पंपों दुई मुख्य समूह विभाजित गर्न सकिन्छ:
हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई विचार गरौं।
यी उपकरणहरू सामान्यतया मोटर संग एक शरीर मा स्थित र दूषित तरल एक यांत्रिक अशुद्धताओं शामिल पम्पिंग लागि लागू छन्। छोटो अवधिमा तिनीहरूले हाइड्रोलिक को एक ठूलो रकम सार्न गर्न सक्षम छन्।
को सील तत्व हाइड्रोलिक संग सम्पर्क बाट मोटर को प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान। नियम यस्ता उपकरण मात्र होइन कृषि र उपयोगिता, तर पनि औद्योगिक उद्यम मूल्य मा प्रयोग गरिन्छ।
तेर्सो प्रकार उपकरण सामान्यतया couplings को माध्यम द्वारा सँगै जोडिएको दुई अलग एकाइहरूको हुन्छन्। भारी प्रदूषित तरल पम्पिंग लागि यी पंपों प्रयोग गर्नुहोस्।
मोडेल, सुसज्जित दबाव गेज संग तिनीहरूलाई काम दबाव नियन्त्रण र सञ्चालन मोड नियन्त्रण गर्न संभावना संग, उपचार बिरुवाहरु संग ढल प्रणाली मा स्थापना गर्न अनुमति दिनुहोस्। साथै, तिनीहरूले चरम वातावरण र रोलिङ स्टक मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपकरण को यस प्रकार निजी घरपरिवारमा, तर पनि कार्यस्थल मा मात्र प्रयोग लागि हो। नियम, तिनीहरूले छैन , एउटा स्क्रिन यी पंपों जो कुनै ठोस कणहरु त्यहाँ हो, फोहोर पानी काम गर्न डिजाइन त।
ढल macerator संग पंप
पर्यटकहरू एक ठूलो संख्या संग क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ मलजल पंपों तकलीफ संयन्त्र। कारण ठाउँमा नाली प्रमुख factions प्रविष्ट गर्न संभावना छ भन्ने तथ्यलाई गर्न। macerator शौचालय संग मलजल पंप - निजी घरमा को लागि आदर्श।
ढल पंपों को लाभ
ढल लागि उपकरण पम्पिंग निम्न तत्त्वहरू हुन्छन्:
एक तकलीफ एक स्वतन्त्र प्रणाली तरल को अभाव मा overloads छ र काम सुरक्षित छ जो जा रहेको छ, faeces लागि संयन्त्र।
शक्ति प्रणाली सेप्टिक ट्यांक को पहिलो कोठामा मा बर्बाद पूर्ण आन्दोलन वातन ट्यांक, जैविक उपचार स्टेशन लागि पर्याप्त। शौचालय कचौरा तंत्र पीस बिना प्रयोग सिस्टम बर्बाद पानी पम्पिंग स्थापना को बाँकी छुट्टै पम्प स्थापना गर्न प्रदान गरिएको छ भने। विद्युत ऊर्जा को खपत बावजुद, उपकरण को यस प्रकार एक निजी घर वा अपार्टमेन्ट मा देश मा एक आरामदायक रहन, प्रदान गर्दछ।
पम्प शौचालय (तल तस्विरमा) निम्न लाभ छ:
निर्माण बजेट मा कमी।
सानो व्यास पाइप प्रयोग गर्न सम्भव।
clogging को खतरा न्यून पारिएको छ।
त्यहाँ मूल्याङ्कन पाइपिंग ढलान पालन गर्न कुनै आवश्यकता छ।
बाहिरी रेखाहरू को स्थापना को कम जीवन।
गुरुत्वाकर्षण को अभाव हाइड्रोलिक प्रचार मा गर्न Resort तर कुनै विकल्प छ मलजल पंप को स्थापना। आफ्नो विविधता र स्कोप बुझ्न, हामी विशिष्ट कार्यहरू लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि सुविधाजनक स्थान, बिल्कुल ढल riser को स्थान बाँधिएको छैन मा सेनेटरी उपकरण स्थिति, तपाईं शौचालय र डुब्नु लागि पम्प स्थापना गर्नुपर्छ। र यो कहाँ redevelopment पूरा भएको थियो मात्र निजी परिवारमा, तर पनि basements र अपार्टमेन्ट, सम्बन्धित छ। को ढल प्रणालीको लागि पंपों को सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल विचार गर्नुहोस्।
यो शौचालय लागि सेनेटरी पंप सजिलो लुक्ने लागि सानो थियो महत्त्वपूर्ण छ। Jemix घरेलू कम्पनी, यसको आफ्नै उत्पादन सुविधाहरु बाहेक, चीन यसको पसलहरूमा लागि ज्ञात छ। आज सबैभन्दा लोकप्रिय निम्न मोडेल हो:
STP-100 - 70 मिटर र उचाइ7पु रिसेट - पंप कचौरा 600 डब्ल्यू 270 एल / मिनेट, लम्बाइ खुवाउन छ।
STP-200 - 100 एल / मिनेट, 80/8 एम रिसेट र शक्ति 400W को आपूर्ति।
STP-400 - 10 बाल्टिन निरन्तर - 400W, 80/8 एम, निर्वहन मा 135 ° C थर्मल सुरक्षा सक्रिय छ, प्रदर्शन।
फ्रान्सेली कम्पनी SFA घर प्रयोग, निम्न मोडेल लागि माग बढेको लागि धेरै उत्पादन लाइनहरु को उत्पादन मा लगे:
Sanipro XR - नुहाउनु / शौचालय लागि उपकरण, सुसज्जित तीन नलिका, क्षमता 90 लिटर / मिनेट संग, पम्पिंग 5/100 मिटर थियो।
Sanipack - पंप सेनेटरी शौचालय पर्खाल प्रकार, सुसज्जित तीन अतिरिक्त नलिका, क्षमता 110 एल / मिनेट संग र 4/40 पु निर्वहन।
Sanispeed - धुलो, noiseless र संकुचित पम्पिंग 70/7 एम लागि व्यावसायिक यन्त्र।
Sanitop Sanibroiyeur - सुसज्जित तेर्सो उत्पादन संग शौचालय र डुब्नु लागि पूर्ण noiseless पंप।
को ढल प्रणाली भित्र माउन्ट SFA पंप को सेनेटरी उपकरण पछि तुरुन्तै बाहिर छ। उपकरण को यस प्रकार को आवास प्लास्टिक बनेको छ, तर किनभने पंप को सानो आकार को पूर्ण इंटीरियर मा फिट हुनेछ। को Ergonomic डिजाइन पूर्ण उच्च प्रदर्शन, कम हल्ला, निर्मित तकलीफ संयन्त्र र सजिलो स्थापना को संग संयुक्त छ।
शौचालय लागि पम्प: उपभोक्ता समीक्षा
तपाईं शौचालय जडान गर्न निम्न कम्पनीहरु को पंप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
उपकरणहरू Grundfos निम्न मोडेल द्वारा संचालित - Sololift2 शौचालय-तीन, Sololift2 शौचालय-1, Sololift2 CWC-3 (पर्खाल बढते लागि)।
कम्पनी Wilo, मोडेल DrainLift KH 32-0,4 EM देखि शौचालय लागि पम्प।
उपकरणहरू जस्तै SFA SaniPRO XR मौन, SFA SaniBroyeur मौन, SFA SaniTop मौन रूपमा SFA मोडेल द्वारा संचालित।
पम्प शौचालय NF 400 कम्पनी DWT, सुसज्जित एक कार्बन फिल्टर संग बाट odors रोक्छ।
यो उपकरण उपभोक्ताहरु को उच्चतम accolades प्राप्त गरेको छ। यो राम्रो गुण र विश्वसनीयता द्वारा विशेषता छ।
शौचालय लागि धेरै पंपों अतिरिक्त एक मूत्रालय, bidet, शवर र चिलमची को नाली जडान लागि डिजाइन inlets संग सुसज्जित छन्। त्यसैले, एक एकाइ जल प्रदान गर्न सक्षम छ बर्बाद पानी एक बाथरूम बाट।
को संलग्न निर्देशन मा निहित उपकरण को मुख्य विशेषताहरु मा जानकारी, पर्याप्त छैन भने, त्यसपछि यसलाई उचित सहयोग को लागि एक विशेषज्ञ परामर्श छ। तर, व्यावसायिक सेवा सस्तो छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो आफैलाई बुझ्न प्रयास लायक छ।
सबै भन्दा साधारण गल्ती गर्दा शक्ति उपकरण को गलत परिभाषा चयन। उदाहरणका लागि, मार्गदर्शन मा fecal पंप Chopper शौचालय ठाडो7एम, तेर्सो मा तरल ओसारपसार गर्न डिजाइन भनेर संकेत गर्छ -। 80 मिटर अभ्यास, यी उपकरणहरू सधैं शिखर क्षमता सीमा मा सञ्चालन छैन। यसले स्टक हेरचाह गर्न उचित छ त कुनै पनि अनगिन्ती लोड, असफलता हुन सक्छ भन्ने हो।
को निर्देशन मा निर्दिष्ट सुविधाहरू, परस्पर केही अर्थमा विशेष हुन्। उदाहरणका लागि, तरल परिवहन तेर्सो मात्र हो भने, उदाहरणीय विधानसभा यसलाई 80 मिटर गर्न आवश्यक वृद्धि2मीटर द्वारा, त्यसपछि फिड दूरी एकदम कम छ भने उठाउनु हुनेछ। त्यसैले। 10 मिटरसम्मको कम छ प्रति मीटर तेर्सो परिवहन दूरी तरल पदार्थ उठाने जब: आधार लागि गणना गर्दा नियम लिनुपर्छ।
शौचालय लागि पम्प छनौट, तपाईं उपखाडी को आकार ध्यान गर्नु पर्छ। यो पाइप नाली ढल मेल महत्त्वपूर्ण छ। प्वालहरू को व्यास फरक हुनेछ भने, स्थापना सही हुने छैन।
पंप एकाइ स्थापना ध्यान निर्देशनहरू पढ्नुहोस् गर्नुपर्छ अघि। नियम, यो सल्लाह र योजनाहरू समावेश गर्छ, र उपकरण आवश्यक सबै, निर्धारण स्क्रू सहित सुसज्जित छ।
नीलो प्रकाश - उपकरण ए Minin
सोधपुछ लागि Snowplows - प्रकार र आफ्नो विशेषताहरु
को ताला उपकरण के हुन्? जो उपकरण ताला कम्पनी सर्वश्रेष्ठ?
आवरण र निर्वात पंप WACS: समीक्षा (फोटो)
खरीद को सम्भाव्यता - ऊर्जा बचत प्रकाश बल्ब
मान्छे संग संचार को मनोविज्ञान।
माध्यमिक उपदंश - लक्षण र प्रभाव
सोनी Vaio। प्रणाली पुनःप्राप्ति: विस्तृत निर्देशनहरू
खराब मुड: neuroscientists खोज द्वारा निर्मूल
खुशबू 1 लाख Paco Rabanne को वैभवशाली
क्रेडिट कार्ड कसरी प्राप्त गर्न, "बचत बैंक" उत्कृष्ट अवस्था प्रदान गर्दछ
विशेषता "विशेषज्ञता र अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन": काम र कहाँ अध्ययन गर्न कसलाई
के सपना पुस्तक गर्छ: हिउँ के सपना drifts?
एक प्रेम एक, वा के पति एक पत्नी चाहनुहुन्छ भने7सुन्दर कारण?
"शीर्ष पट्टी"। कजान र शिल्प बियर
100 ढोका 2: सबै स्तरको खण्ड